ယောဘသည်ကမ်းလှမ်းချက်: ဒါရိုက်တာ / ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ် (M / F) (အပေါ်) Tetra TECH သုတေသန - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကွန်ဂို - ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ - ဂျော့ဘ် • ယောဘသည်အခွင့်အလမ်းများ "ယောဘ: Tetra TECH သုတေသနညွှန်ကြားရေးမှူး / ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ် (M / F) (အပေါ်)
ယောဘသည်ကမ်းလှမ်းချက်: Tetra TECH သုတေသနညွှန်ကြားရေးမှူး / ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ် (M / F) (အပေါ်)
Visda 29 ခုနှစ်ဧပြီလ 2019
အဆိုပြုထားသောရာထူး: ညွှန်ကြားရေးမှူး / အကြီးတန်းဘဏ္ဍာရေး (M / F)ကျနော်တို့က (တစ်ဦး) ရှာကြသည် ဒါရိုက်တာ / ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ် (M / F) အစောပိုင်းစာချုပ်များအတွက်, USAID ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်မှတဆင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးတို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်, ဒီစာချုပ်စျေးကွက်ဝင်ရောက်ခွင့်တိုးမြှင့်ဖို့နှင့်အတူလိုက်ဖက်သောစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောအာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ, စတင်ရန်မိတ်ဖက်များ၏ကျယ်ပြန့်အကြားပူးပေါင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ် သစ်တောနှင့်၎င်း၏အရင်းအမြစ်များရေရှည်တည်တံ့စီမံခန့်ခွဲမှု။
အချိန်ကာလပေါ်မှာရှိသမျှငွေကြေး, အုပ်ချုပ်ရေး, လိုက်နာ, ဝယ်ယူရေး, subcontracting နှင့်စီမံကိနျးအတှကျလိုအပျတဲ့လူသားအရင်းအမြစ်များကိုကယ်နှုတ်တာဝန်ရှိသည်။ DAF ယေဘုယျအားဖြင့်လက်ခံထားသောစာရင်းကိုင်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှစာရင်းကိုင်နှင့်စီမံကိန်းရုံး၏ဘဏ္ဍာရေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်သင့်လျော်သောနှင့်လုံလောက်သောပြည်တွင်းရေးထိန်းချုပ်မှုများတည်ထောင်ခြင်း၏ယေဘုယျစနစ်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ quick စာအုပ်များအတွေ့အကြုံကိုအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ညွှန်ကြားရေးမှူး / ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ် (M / F): အပြုသဘောအဘို့ရှာကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း
နည်းပညာဆိုင်ရာ, အကောင်းဆုံးမာစတာ၏တဦးတည်းနှင့်ဆက်စပ်သောလယ်၌ဘွဲ့ / ဘွဲ့;
အလားတူရှုပ်ထွေးနှင့်အတူအလှူရှင်များအားဖြင့်ရန်ပုံငွေစီမံကိန်းများအပေါ် ပို. ပို. မြင့်မားသောအဆင့်မှနည်းပညာဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုတာဝန်များကိုအတွက်အစိုင်အခဲအတွေ့အကြုံကို;
Microsoft Word, Excel နဲ့ PowerPoint ၏အသိပညာ,
ပြင်သစ်၏ Excellent က command ကို, အင်္ဂလိပ်၏အသိပညာတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အပြုသဘော FOR ကြေညာခဲ့သည့်သတ်မှတ်ချက်: ညွှန်ကြားရေးမှူး / ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ် (M / F)
Ville : ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ
2 နှစ်အကြား, အတွေ့အကြုံများ5နှစ်ပေါင်း
်ထမ်းခေါ်ယူမှု 20 တစ်ဦးက SMART General ဘွဲ့ရ
ယောဘသည်ကမ်းလှမ်းချက်: Nexcom အတိုင်ပင်ခံသုတေသနနှစ်ခု (2) အရာရှိချုပ် (s) ကိုလေ့လာမှုစျေးကွက်နှင့်သဘောထားစစ်တမ်း (M / F) ၏။